Thursday October 17, 2019 - 08:50:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya dilal xalay siyaaba kala duwan uga dhacay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
Sawir hore ciidamo katirsan Nabad sugidda
Xoogag hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa xalay fiidkii xaafadda Baar ha idhaafin ku dilay sedax kamid ah saraakiisha ciidamada sirdoonka dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa dharcadka loo yaqaan.
Goob joogayaal ayaa sheegay in xoogagga dilka geystay ay saraakiisha Nabad sugidda ka furteen Sedax bastooladood oo ay ku hubeysnaayeen "Mujaahidiinta ayaa sedax katirsan Sirdoonka Kooxda Riddada qeybta dharcadka loo yaqaan ku dilay degmada Waaberi bastooladihii ay wateenna waa ka qaniimeysteen Alle ayaa ku mahadsan mujaahidiinta usuurta geliyay howlgalkan guulaystay" ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay Al Shabaab.
Dhinaca kale rag hubeysan ayaa degmada Dharkeynleey ee magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal darajadiisa ciidan aheyd laba xidigle oo katirsanaa ciidamada dowladda, sarkaalka ladilay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cusmaan Calasow .
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Al Shabaab ay sare uqaadday beegsiga ay ku hayso sirdoonka dowladda gaar ahaan qeybta loo yaqaan dharcadka kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay ay dowladda Federaalka ku dhax faafinaysay degmooyinka gobolka Banaadir, Al Shabaab ayaa go'aansatay in ay gummaado dhalinyarada bastooladaha lagu hubeeyay ee lagasoo abaabulay xarunta Nabad sugidda ee Habar Khadiijo.
Waa fashil kale oo ku yimid isku daygii ay xukuumadda Kheyre ku doonaysay in ay wajiga kale ugu yeesho maleeshiyaadka sumcadda xun ee NISA loogu yeero kuwaas oo fuliya ajandayaasha Mareykanka iyo Itoobiya.
Ku darso Page-ka SomaliMeMo ee Facebook oo Like saar